Volan’ny teny malagasy: samy nanezaka… Samy miandry vokatra | NewsMada
Volan’ny teny malagasy: samy nanezaka… Samy miandry vokatra
Na teo aza ny valanaretina covid-19, tsy nahasakana ny nanamarihana ny « Volan’ny teny malagasy » akory izany. Ny endrika nisehoany no mety niova…
… Saika tamin’ny fampiasana ny tambajotran-tserasera samihafa no niaingana nanatontosana ny hetsika ho fanamarihana ny « Volan’ny teny malagasy » tamin’ity taona 2020 ity, noho ny fisian’ny valanaretina covid-19 teto Madagasikara sy maneran-tany. Tao ireo nanentana mafy sy totoafo mihitsy ny amin’ny tokony hampiasana ny teny malagasy. Tsy vitsy ny nanatanteraka fifanakalozan-kevitra nampitain-davitra niompana tamin’ny fanabeazam-boho ny teny malagasy sy fanajana ny fitsipi-panoratana, sns.
… Samy nanezaka, izay rehetra afaka nanao izany, nandritra ity volana jona ity. Na tsy ny rehetra aza no afaka nandray anjara, tsikaritra kosa fa nitarika hafanam-po vaovao indray teo amin’ny Malagasy ny fampiasana ireny tambajotran-tserasera ireny. Samy miandry ny vokatra ny rehetra. Hisy dingana ho vita indray ve atsy ho atsy momba ny fiteny malagasy? Nandaitra any am-po sy any an-tsain’ny Malagasy ve ireo karazana tsipy hevitra maro nifanaretsaka tany anaty « facebook » ?
Tsy nijanona tamin’ny teny ihany
Volana jona, nolalovan’ny fanamarihana ny niverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena ihany koa. Nifameno tamin’ny « Volan’ny teny malagasy » izany ka tokony hampisongadina vokatra tsara atsy ho atsy. Anisan’ny andrasan’ny maro amin’izany, ny tanora hanaja ny fiteny malagasy. Ny lehibe hiteny sy hampiasa ary hirehareha amin’ny fananana ny fiteny malagasy. Ny taranaka malagasy ampianarina amin’ny fitenin’ny razany. Ny lalana eto Madagasikara, ho voasoratra manontolo amin’ny fiteny malagasy, sns.
Raha jerena amin’ny saina tsy miangatra ireo, tsy misy zava-tsarotra fa mitaky finiavana sy fandraisana adidy eo amin’ny tsirairay.
… Tsy ny endrika ivelany no zava-dehibe fa ny fahatsapana fa Malagasy hatrany anaty fanahy. Io mantsy no very sy simba eo amin’ny Malagasy sasany. Variana loatra amin’ny endrika ivelany, hany ka ataon’ny « hafa » kilalao ny tena maha izy azy. Zaza malagasy, ampianarina amin’ny fiteny vahiny, izany dia eken’ny Malagasy ! Ohatra ihany io fa maro tsy tambo isaina ny tranga mamoafady sy tsy voajanahary tahaka izany eto Madagasikara.
… Antoka iray tena iainana ao anatin’ny Fahaleovantena marina tsy misy fitaka sy lainga ny fananana « Fahaleovanteny » !